Nabadoon lagu caleemasaaray duleedka degmada Burtinle. – Radio Daljir
Luulyo 30, 2016 2:33 b 0
Burtinle, July 30 2016-Xaflad balaaran oo ka dhacdat duleedka duleedka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal islamarkaana ay ka soo qaybgalen Cuqaasha, Salaadiinta iyo Waxgaradka qaybihiisa kala duwan, Masuuliyiin ka socotay dawlada Puntland, Culima’udiin, dhalinyarada iyo haweenka ataa lagu caleemasaaray Nabadoon Siciid Nabadoon Maxamed Cismaan.
Dhamaan Cuqaashii iyo waxgaradkii kala duwanaa ee madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay nabadoonka cusub ee madashan lagu caleemasaaray islamarkaana muujiyay in ay la qaateen beesha reer Xirsi Faarax ee iska soo dhexdooratay uuna yahay mid ka soo bixi kara masuuliyada loo dhiibay.
Xildhibaan C.qaadir Xusein Nuur Dirir oo ka mid ahaa hogaaminayayna Masuuliyiinta dawlada Puntland ku matalaysay ka qaybgalka caleemasaarkan ayaa muujiyay kaalinta dawlada ee la shaqaynta hogaanka dhaqanka bulshadu ay dooratay, wuxuuna kula dardaarmay nabadoonka in uu si cadaalad ah ugu shaqeeyo guud ahaan umada Soomaaliyeed, gaar ahaana beesha soo dooratay.
Nabadoon Siciid Nabadoon Maxamed Cismaan oo ah nabadoonka maanta la caleemasaaray ayaa gabagabadii khudbad kooban ka jeediyay madasha wuxuuna balan qaaday in uu si cadaalad ah ugu shaqayn doono dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan beesha xilkan u dooratay.
Sidoo kale nabadoonku wuxuu tilmaamay in maanta laga bilaabo ay umadu u siman tahay, islamarkaana uu ugu shaqayn doono sidii looga bartay Aabihi iyo Walaalkii oo saldanadan isaga soo dambeeyay.
Nabadoon Siciid Nabadoon Maxamed Cismaan ayaa lagu doortay shir mudo sadex maalmood ah beesha uga socday duleedka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal halkaas oo si weyn loogu falanqeeyay ahmiyada hogaankan dhaqanka, ugu dambayna lagu go’aansaday hogaankisa.